Fitantanana eny ifotony: tsy hita taratra ny fampandrosoana any Itasy | NewsMada
Fitantanana eny ifotony: tsy hita taratra ny fampandrosoana any Itasy
Par Taratra sur 14/01/2021
Inona sy aiza ny tena olana? Faralahy ny any amin’ny faritra Itasy. Tsy mba hita ny governora manoloana ny fitantanana ny faritra. Efa voatendry amin’ireo governora andiany voalohany ny mpitantana nefa tsy misongadina ny bainga voavadika, raha mitaha amin’ireo faritra, niara-notendrena taminy.
Tsy mba hita taratra ny fandrosoana any amin’ireo distrika telo: i Miarinarivo sy Arivonimamo ary i Soavinandriana. Betsaka ireo fotodrafitrasa tokony hatsangana na hatsaraina, saingy tsy misy hetsika ataon’ny mpitantana eo anivon’ny faritra. Efa simba na ratsy ny ankamaroan’ireo fotodrafitrasa any an-toerana fa tsy misy fijerena izany. Tahaka izany koa ny fanamboaran-dalana. Tsy mifanaraka amin’ny tokony hatao sy hamboarina no vita. Tafiditra ao anatin’izany ireo lalana famoahana ny vokatra mampalaza ny faritra Itasy.
Zary isehosehoan’ny mpitantana ireo asa ataon’ny fanjakana foibe any an-toerana. Lasa ireo depiote indray no miady mafy hampandrosoana ny any an-toerana. Araka izany, tokony hojerena akaiky ny fitantanana tahaka izao.